မွန်အမျိုးသား ကိုယ်စားပြုပါတီ ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့် မွန်ပြည်သစ် ပါတီတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေ? - Yangon Media Group
မွန်အမျိုးသား ကိုယ်စားပြုပါတီ ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့် မွန်ပြည်သစ် ပါတီတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေ?
မော်လမြိုင်၊ မတ် ၁၃
မွန်အမျိုးသားကိုယ်စားပြုပါတီဖော်ဆောင် ရေး ၂၁ ဦးအဖွဲ့ ပါတီဖော်ဆောင် ရေးအဖွဲ့အား ဦးဆောင်ကြီးကြပ် ရေး ၁၉ ဦးအဖွဲ့နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို မတ် ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် မော်လမြိုင်မြို့ ဘိုကုန်းရပ်ကွက်ရှိ အောက် ပဲခူးကျောင်းခန်းမဆောင်၌ ကျင်း ပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ဒီကနေ့လုပ်တဲ့ အစည်းအ ဝေးကတော့ အဖွဲ့သုံးဖွဲ့တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတဲ့ သဘောပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နဲ့ ၁၄ ရက်က သာသနာ ၂၅ဝဝ ဓမ္မာရုံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ခြောက်လအတွင်း မွန်တစ်မျိုးသားလုံးကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါတီအသစ်ကို ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မယ်။ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ စုစုစည်းစည်း ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမလဲဆိုတာရယ်၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ ၁၉ ဦးအဖွဲ့၊ ၂၁ ဦးအဖွဲ့တွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ မသိသေးတဲ့အပိုင်းတွေကို သူတို့သိရှိနားလည်လာအောင် ရှင်းလင်းပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့လည်း ချက်ချင်းအဖြေပေးမသွားပဲ သူတို့ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြဆွေးနွေး ပြီး အကြောင်းပြန်ကြားမယ်လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်” ဟု မွန်အမျိုးသားကိုယ်စားပြုပါတီဖော် ဆောင်ရေး ၂၁ ဦးအဖွဲ့မှ ပြော ရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး (မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒု တိယဥက္ကဋ္ဌ) ကပြောသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် အောက်ပဲခူး ကျောင်းဆရာတော် ဦးသီလစာရက အဖွင့်အမှာစကာြး>ွမက်ကြား ပြီးနောက် မွန်အမျိုးသားကိုယ်စား ပြုဖော်ဆောင်ရေး ၂၁ ဦးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူနှင့် ပါတီဖော်ဆောင် ရေးအဖွဲ့အား ကြီးကြပ်ရေး ၁၉ ဦးမှ တာဝန်ရှိသူများက ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ရှေ့ ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြကာ တင် ပြချက်အပေါ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး နိုင်အောင်မင်းက ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ”မွန်အမျိုးသားကိုယ်စားပြုပါ တီဖော်ဆောင်ရေး ၂၁ ဦးအဖွဲ့နဲ့ ၁၉ ဦးအဖွဲ့တွေက ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် တောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ငါးဦးပါဝင်တဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ တွေ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သာသနာ ၂၅ဝဝ မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မွန်အမျိုးသားညီလာခံရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားတယ်။ ဒီအပေါ်ဘယ်လိုမြင်လည်းစသဖြင့် သူတို့မေးတဲ့အပေါ် ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစည်းအ ဝေးထိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ အကြောင်း ပြန်ကြားပါမယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်” ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ပြည်တွင်းတာဝန်ခံ နိုင်ဝင်းလှကပြောသည်။
ရုရှား အိုလံပစ်အဖွဲ့က နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ်အဖွဲ့ကို ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း လျော်ကြေးပေးဆောင်ရ
နွားပွဲဈေးတွင် နွားဈေးကောင်းသဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သူ များပြားလာ